Ungayonga kanjani imali: izindlela ezinhle zokuziphilisa | Ezezimali Zomnotho
Uma umncane, ucabanga ukuthi imali yinto ephuma encwadini, noma ekhadini nokuthi ungaba nokuningi njengokufunayo. Ngakho-ke, awuqondi ukuthi abazali bakho baqala nini ukukufundisa ukuthi wonga kanjani imali. Kuze kube uyaqonda ukuthi "ayiwi ezihlahleni."
'Izinkomo ezivilaphayo' yizinkathi umuntu adlula kuzo ezikhathini eziningi. Futhi ukuba nomatilasi abangabizi kakhulu noma ukungabi nawo kungaba umehluko phakathi kokulala kahle ebusuku noma ukungami ukujikijela nokujika ukuze uthole ukuthi uzophila kanjani. Uma ukhathazekile futhi ufuna ukwazi ukuthi ungonga kanjani imali, Namuhla sizokhuluma nawe ngalesi sihloko ngendlela ephathekayo.
1 Kungani wonga imali
2 Izindlela ezisebenzayo zokugwema amapokhethi angenalutho
2.1 Indlela "yoshintsho oluncane"
2.2 Indlela yemvilophu
2.3 Indlela "yezinhlelo zokusebenza"
3 Amathiphu okusindisa imali
3.1 Hlala ugcina isabelomali sakho engqondweni
3.2 Funa okunikezwayo, izaphulelo, ukuthengiselana ...
3.3 Ikhadi lasebhange lingusathane okhangayo
Kungani wonga imali
Imali ayinikezi injabulo. Kepha ungaboni ukuthi kusiza kanjani. Impela ngesinye sezisho ozizwile (ikakhulukazi esokuqala). Okwesibili, kwesivuno sethu, yilokho cishe bonke abantu emhlabeni abakucabangayo.
Futhi yilokho ukuba nemali kukuvumela ukuthi wenze izinto eziningi. Asisakhulumi ngezifiso noma ngokuzitika njengokuhamba, ubucwebe, ukuthenga izinto ... kepha kuyinto ethulisa ingqondo yakho: ukuba nemali yokuthenga inyanga yonke, ukukhokha izindleko nezikweletu zendlu yakho, imoto ...
Kepha kuthiwani uma unokwanele lokho futhi konke okutholayo uyakusebenzisa? Uhlala ngendlela eyingozi. Yebo, awuzincishi lutho, futhi imali yakho ikuvumela ukuthi wenze izinto ezijabulisayo. Kepha inkinga ukuthi izehlakalo ezingalindelekile zihlala zikhona ekhoneni futhi, lapho zifika, uma ungenakho okuthile okulondoloziwe, kungasho ukudabula umugqa omubi kuze kufike lezo zindleko.
Ngakho-ke, esinye sezizathu eziyinhloko zokonga imali ukuvimbela izindleko ezingalindelekile (ukuthi imoto kufanele iye kumakhenikha, ikhefu lokugula, idinga ukuthenga ikhompyutha ...). Kholwa noma ungakukholwa, lokhu kubaluleke kakhulu empilweni yakho yengqondo ngoba, ngokwazi ukuthi unokuthile okulondoloziwe, uzokhathazeka kancane ngaleyo nkinga eyehlele wena.
Esinye isizathu sokonga imali, ngaphandle kokungabaza, ungubani uyakwazi ukuzihlela ngeholo lakho nokusetshenziswa kwakho. Uma ukwazi ukuthola imali ekupheleni kwenyanga, noma ngabe ilungile ngeholo nangezindleko, kuzosho ukuthi wenza kahle, nokuthi wazi kahle ukuthi ungahlukanisa kanjani phakathi kokudingayo nalokho okunikelayo ' t. Futhi, uyakwazi ukuthenga izinto ngezaphulelo, okunikezwayo, njll. evumela wena ukuthi uthole ukonga (okuncane noma okuningi).
Izindlela ezisebenzayo zokugwema amapokhethi angenalutho
Manje, sikwazi kanjani ukonga? Yebo, esinye sezakhiwo okufanele usinakekele yilezi ezilandelayo: Imali eyingxenye yokonga ayithintwa. Futhi ibhonasi: imali evela kulondolozo ikhohliwe.
Kungani sikutshela lezi zinto ezimbili? Kulula kakhulu, ngoba Awukwazi ukugcina ukushintshaniswa kokuqala bese uthatha leyo mali nganoma yini. Futhi awukwazi ukuthembela kuleyo mali nganoma yini. Kalula ngoba "ayitholakali."
Futhi ngonga kanjani? Nazi ezinye izindlela eziphumelela kakhulu:
Indlela "yoshintsho oluncane"
Kumele ngabe uyothenga futhi wakhokha ngethikithi. Lokho kusho ukuthi ubuyisa izinhlamvu zemali. Noma izinhlamvu zemali nezikweletu. Uma kunjalo, nsuku zonke ufika ekhaya, uthulule izikhwama zakho zemali bese uzibeka eceleni. Lokho wukusindisa onakho. Kuphela lapho imbiza (noma lapho ubeka khona) igcwele (futhi kungcono ukuthi uthathe ibhange elikhulu lezingulube), uzokwazi ukulibala futhi ubone ukuthi ubulondoloze kanjani.
Ekuqaleni, ungayisebenzisela ukuzelapha, kepha-ke uzobona ukuthi uma uyivumela, uzozizwa ungcono kakhulu ngokungenzeka.
Lokhu kungenye yezinto ezisetshenziswa kakhulu, futhi iqukethe i- hambisa imali oyitholayo ezimvilophini ezahlukene: enye yezindleko zocingo ne-inthanethi, enye yezokuthenga ... nenye yokonga. Futhi leyo imvilophu yiyo ongeke ukwazi ukuyithinta (empeleni, yiyo okufanele uyivale futhi uyonge ukuze ukhohlwe ngayo).
Indlela "yezinhlelo zokusebenza"
Ngesikhathi sobuchwepheshe obusha, enye inketho ukwethula ezinye isicelo esikusiza ukuphatha imali engenayo nezindleko. Futhi lapho imali igcinwa khona ebhange (ngoba awusebenzisi konke okukhokhisayo).
Inkinga ukuthi kuvame ukubandakanya ukusebenzisa ikhadi, futhi kuya ngabantu onganconyiwe. Okuhle ukuthi njalo uma uthenga uzobonakala kuhlelo lokusebenza futhi uzobona ukuthi ngabe "i-akhawunti" ihamba kahle yini noma uma ufaka "izinombolo ezibomvu".
Amathiphu okusindisa imali
Ngaphambi kokuqeda, sifuna ukukushiyela amanye amathiphu angasiza lapho ugcina imali. Abaningi bazobukeka bekhubazekile, kepha iqiniso ukuthi bayasebenza futhi, noma ngabe kungamasenti ambalwa nje, ukonga kuzokuvumela ukuthi ube nokuxazulula futhi, ngaphezu kwakho konke, ukuthula kwengqondo. Ngakho-ke zibheke zonke:
Hlala ugcina isabelomali sakho engqondweni
Faka kukholomu imali onayo inyanga yonke. WONKE UMUNTU. Uma inyanga ngayinye yehlukile, kuzodingeka ukuthi wenze isabelomali senyanga ngayinye. Manje, kwenye ikholomu, faka izindleko ozoba nazo.
Inhloso ukuthi wena ubone okusele emholweni wakho. Kepha, asincomi ukuthi ubheke lokho njengokonga, okwamanje, okungenani. Nikeza okungenani u-50% waleyo nsalela ezindlekweni ezingalindelekile. Lokhu kungenzeka noma kungenzeki, awusoze wazi. Enye ingxenye, ungayihlukanisa kabili bese ukhetha ukusebenzisa ingxenye eyodwa (ukuzithokozisa), bese ugcine enye njengeyongiwe. Noma ugcine konke.
Ekupheleni kwenyanga, uma kungabanga khona izehlakalo ebezingalindelekile, leyo mali obuyibekile kufanele iye kukholamu yokonga. Futhi njalo ngenyanga.
Funa okunikezwayo, izaphulelo, ukuthengiselana ...
Kepha cabanga ngekhanda lakho. Kwesinye isikhathi okunikelwayo akukuhle njengokulindelekile, noma izaphulelo zibiza kakhulu ekugcineni. Ngakho-ke zinike isikhathi sokubheka ukuthi kuwufanele ngempela yini, ukuthi ungathenga kuphi kushibhile (ngaphandle kokulahlekelwa yikhwalithi noma ukubeka impilo yakho engcupheni).
Vele, noma ngabe uthola izindawo ezingabizi kakhulu ongazithenga, futhi cabanga ngezindleko ezingaba khona: ezokuthutha, isikhathi ... Ngoba mhlawumbe futhi akwenzeli wena. Kulezi zimo, kuhlale kungcono ukuthenga "okukhulu", okungukuthi, kanye ngesonto, njalo ezinsukwini eziyi-15, noma ngenyanga. Ngale ndlela, ukonga kuzoba okubaluleke kakhulu.
Ikhadi lasebhange lingusathane okhangayo
Futhi kungenxa yezizathu ezimbili: esisodwa, leso awuboni ukuthi ukhokhelani, ngoba unika ikhadi futhi ucabanga ukuthi alilikhulu kangako (kepha-ke uma ubona i-akhawunti yakho yasebhange yehla noma ingena kokubomvu, izokunika okuthile); futhi okwesibili, ngoba kuhilela isikweletu, ikakhulukazi uma kuyikhadi lesikweletu lapho izindleko ziqoqeka khona bese beziqoqa zonke ndawonye.
Ngakho-ke, ngangokunokwenzeka, njalo zama ukukhokha ngokheshi. Kuyindlela elula yokugcina zonke izindleko zakho kuleyo ncwadi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ilondoloza » Ukuphela kwenyanga » Indlela yokonga imali